UEFA Oo Isbeddel Ku Samaynaysa Qaabkii Loo Ciyaari Jiray
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa go’aan kama dambays ah ka qaadanay waqtiga dib loo bilaabayo ciyaaraha tartanka Champions League iyo Europa League, kuwaas oo la filayo in bisha August laga sii jaan-qaado halkii ay ku istaageen bishii March.
UEFA waxay shir ka yeelanaysaa qaabka loo ciyaari doono kulamada hor yaalla dhawr xaaladood oo ay kala dooranayso si loo fudaydiyo in ciyaaruhu hore ugu dhamaadaan, loona yareeyo kulamada badan ee u baahan inay muddada dheer socdaan.
Maadaama waqtigu kooban yahay oo kulamada ay tahay in si degdeg ah loosoo dhameeyo, qorshaha la filayo inay UEFA qaadato ayaa waxa uu yahay in go’aan laga gaadho sida kulamada loogu soo gaabin karayo min hal lug marka ay soo dhamaadaan ciyaarihii min halka lug la dheelay ee wareegga 16-ka Champions League.
Sida laga dheehday qorshaha aan wali sida rasmiga ah loosoo bandhigin ee UEFA, waxa August 2 bilaabmi doona tartanka Europa League oo kulamadiisa wareegga 16-ka la ciyaari doono, waxaana toddobaado yar gudahood loo gudbi doonaa wareegga siddeedda iyo semi-finalka ka hor inta aan finalka la isla gaadhin.
Usbuuc walba waxa dhici doona laba ciyaarood, taas oo ka dhigan in hal toddobaad lagu soo gabogabayn doono kulamada wareegga 16-ka, usbuuca xigana wareegga siddeedda, halka midka saddexaadna semi-finalka lagu kala caddayn doono.
Tartanka Champions League ayaa isaguna bilaabmi doona August 7, waxaana kooxuhu ay toddobaad walba ciyaari doonaan laba jeer sida Europa League oo kale, waxaana ugu dambaynta lasoo gunaanadi doonaa dhamaadka bisha August.
Finalka Champions League ayaa la ciyaari doonaa August 26, waxaana saddex maalmood uu ka dambayn doonaa finalka Europa League oo August 23 loo qoondeeyey.
UEFA waxa kale oo qorshaheedan ku jira in afarta kooxood ee iskugu soo hadha semi-finalka Champions League in la geeyo magaalada Istanbul oo min hal kulan oo kaliya lagu kala saaro, kaddibna labada finalka si degdeg ah loo ciyaarsiiyo.
Dhamaan kulamadan ayaa waxay noqon doonaan kuwo albaabadu u xidhan yihiin, waxaana ciyaartoyda loo diidi doonaa inay safarro galaan gudaha waddankaas amaba ay dibedda uga baxaan Turkey si xanuunka loo xakameeyo.
UEFA waxa kale oo ay go’aan kama dambaysa ah ka gaadhi doonaa June 17, tartanka Euro 2020 ee dib loogu riixay sannadka dambe, kaas oo qorshuhu ahaa in 12 garoon oo ku yaalla dalal kala duwan lagu ciyaaro.